Tilmaamaha ugu fiican iyo xeeladaha baccarat - Gambling Papa
1 Waa maxay baccarat?
2 Sidee loo ciyaaraa baccarat?
3 Maxay yihiin jaantusyada istiraatiijiyadda baccarat?
4 Tilmaamaha Baccarat ee bilowga
5 Xeeladaha khamaarka Baccarat
6 Talooyinka iyo tabaha baccarat ee ugu fiican ee kaa caawiya inaad guuleysato
Laga yaabee, inaadan fursad u helin inaad ku dhex gasho gudaha casino oo bixiya khibrad dhaqammo dhab ah. Si kastaba ha noqotee, kuwa fursad u helay, Baccarat wuxuu ka mid yahay cayaaraha xiisaha badan ee dhismaha. Maaddaama aad ku ciyaareyso kaararka dhaqanka, waxaa jira wax ku saabsan oo u muuqda mid la yaqaan. Hase yeeshee, in kasta oo ay jirto, haddana waxaa jira sheeko ku filan oo lagu hubinayo inaadan caajisin.
Waa maxay baccarat?
Qof meesha jooga xitaa ma ogaan karo ciyaartan inay jirto? In kastoo in badan oo naga mid ahi ay ugu yaraan maqleen, haddana tiro is le’eg ayaa loo reebay midna xigmad badan. Nasiib wanaag, marka loo eego aragtideena, sameynta waxaas oo kale waxay noqoneysaa xumaan guud. Iyada oo asal ahaan ka soo bilaabaneysa qarnigii 19aad, si cad, tani waa qayb ka mid ah hiddaheena dhaqan ee ay tahay in qof walba la wadaago.
Ciyaar kaararka kaararka ah ee ka soo horjeeda ciyaartoyga guriga:
Si la mid ah Blackjack, markaad ciyaareyso ciyaar Baccarat, waxay noqon doontaa inaad miiska fariisato. Adiga oo kaa soo jeeda dhinaca kale, waxaa jiri doona ganacsade. Ganacsade gacanta ku haya wax kasta oo qurux badan inta ciyaartu socoto. Guud ahaan marka laga hadlayo, guriga waxaa la siiyaa faa iido yar duruufaha badankood. Sidaa darteed, in ka badan habeen la siiyay, waa inay hore u soo baxdaa iyadoo aan loo eegin sida gacmaha shaqsiyeed u ciyaaraan.
Wuxuu ka koobnaa dhowr afgembi:
In kasta oo magacu jiro, haddana ma jiraan wax halkan kuugu wargalin kara. Markaad ciyaareyso ciyaar Baccarat, kani waa ereyga ay dadku u adeegsadaan inay ku sifeeyaan wareeg kasta oo buuxa oo ciyaarta ah. Ciyaaraha kaararka Ingiriisiga badankood waxay si fudud ugu yeeri karaan tan.
Mid kasta oo ka mid ahi wuxuu leeyahay saddex natiijo oo suurtagal ah:
Inta lagu jiro wareegan kasta, waxaa jira saddex natiijo oo suurtagal ah. Waxay kuxirantahay sida kaararka ay u dulsaaranyihiin miiska, waad ku guuleysan kartaa gacanta ama waxaad lumineysaa gacanta. Waxaa intaa sii dheer, waxaa sidoo kale jirta suurtagalnimada isku soo laabasho. Si ka duwan ciyaaraha kale ee kaararka casino, waa suurtagal inaad lacag sameyso inkasta oo aad lumiso gacanta. Laga yaabee, muuqaalkan ciyaarta ka dhigaya mid aad u soo jiidasho leh dadka jidka maraya.
Noocyo dhowr ah oo kala duwan ayaa sii wada madadaalada khamaarayaasha adduunka oo dhan:
Dabcan, xitaa kuwa khibrada u leh waxay ku qasban yihiin inay yeeshaan waxoogaa cabsi ah markay galaan xarun aan la aqoon. Taariikhdaas dheer, waxay noqon laheyd mid aan la fahmi karin in qof walba adeegsado isla xeerar isku mid ah adduunka oo dhan. Xaqiiqdii, daqiiqado yar gudahood, xitaa kooxaha ugu caansan ee ciyaartoydu waxay xallin karaan khilaaf kasta. Si kastaba ha noqotee, waxay umuuqataa in seddex qawaaniin qaas ah oo qawaaniin ah ay sare ugu kaceen gobolada badankood. Meelaha qaarkood, erey gaar ah oo ciyaarta ka mid ah ayaa laga yaabaa inay ku adkaato maskaxda dadka. Weli, dhawr mayl uun baa jirta, sheekadu waxay noqon doontaa wax kale gabi ahaanba.
Sidee loo ciyaaraa baccarat?
Marka, ku filan taariikhda ciyaarta xiisaha leh ee nasiibka ah. Sida iska cad, haddii ay wali sii socoto sannado badan ka dib, wax ku saabsan waa inay u qalantaa inta badan. Haddii aadan waligaa dareemin xiisaha wicitaanka saxda ah ee ciyaarta Baccarat, markaa waxaad ku jirtaa mid ka mid ah safarada ugu ba’an noloshaada. Haddii aad ku ciyaartid khadka tooska ah ama shaqsi ahaan, waxay noqon doontaa wax aad u xasaasi ah markii aad xanaaqdo.
Inta badan, casinos-yada waxay adeegsadaan inta udhaxeysa 3 ilaa 6 heerka 52 kaararka caadiga ah:
Qaarad ilaa qaarad, kaararka caadiga ah ee kaararka waxaa ku jira 52 cutub oo shaqsi ah. Si kastaba ha noqotee, iyada oo aan laga gaabin, waxay umuuqataa sidii haddii casinos ay u adeegsadaan seddex ama in ka badan oo iyaga ka mid ah miis keliya. Dabcan, waxay kaa caawineysaa inaad hubiso in cilladaha tirakoobka aysan ka shaqeynaynin danahaaga inta badan. Si kastaba ha noqotee, xitaa kun taariikhi ah wali wuu xaalufin karaa ciyaartoy maskaxdiisu ay dadaal badan tahay munaasabadda.
Inta lagu jiro wareeg kasta, ganacsadaha ayaa bixin doona kaararka:
Marka aad fadhiisato miiska, waxaa lagu weydiin doonaa inaad dhigto sharadyadaada. Waxay kuxirantahay sida aad dareemeyso, waxaan kuu soo jeedineynaa inaad ku bilowdo wax yar. Kuwa aan waligood khamaarin kahor, had iyo jeer way fiicnaan doontaa inay lumiyaan xoogaa lacag ah bilowga. Haddii kale, xaraaradda go’aamada aakhirada ah ayaa ka badnaan karta in lagu xannibo xitaa kuwa ugu badan ee dhexdeenna ka jira.
Kahor intaan qof walba bilaaban, waxaad sharad ku geli kartaa xisbiga ku guuleysan doona wareegga soo socda:
Marka sariiraha la dhigo, ganacsadaha ayaa bilaabi doona inuu dhiibo kaararka. Qaar iyaga ka mid ah miiska ayey u jiifsan doonaan. Dhinaca kale, kuwa kale ayaa wajihi doona dhammaantood si ay u arkaan.
Wax kasta oo ka yar 10 ayaa xambaarsan qiimaha wajigiisa:
Adoo adeegsanaya awoodaha xisaabinta maskaxda, ku dar dhibcaha dhammaan kaararka oo leh calaamadda lambar ee wejigooda. Si tan loo sameeyo, kaliya u xilsaar kaarka qiimihiisa wajiga inuu yahay dhibcihiisa.
Kaararka Royalty-ka iyo 10-ka kaar waxaa loo qoondeeyay qiime eber ah:
Markaad dhamaysato kaararka tirada, waxaad u gudbi kartaa kuwa xambaarsan wejiyada boqortooyada. Iyaga, waxaad siin doontaa dhammaantood qiimaha eber.
Aces waxaa lagu tiriyaa 1:
Ugu dambeyntiina, aces kasta oo ciyaar ah, waxaad u xilsaari doontaa si qumman oo ay uqalmayaan 1. Taasi waxay ka dhigeysaa inay ka mid yihiin kaararka ugu badan ee ciyaarta. Gaar ahaan gacanta ciyaartoy khibrad leh, kaarka aceceeda oo si fiican loo qabtay ayaa noqon kara waxa rogmada.
Ugu dambayntii, isku dar qiimayaasha labada kaar ee gacantaada ku jira si aad u go’aamiso qiimaha guud ee gacanta:
Markaad u qoondeeysid kaararka oo dhan qiimahooda, waxaad go’aamin kartaa qiimaha ugu dambeeya ee gacan kasta. Si loo xisaabiyo qiimaha gacan kasta, si fudud ku dar qiimaha kaar kasta oo gacmaha ku wada jira. Qaar ka mid ah natiijooyinka ayaa ah waxa aad u isticmaali doontid inaad ku ogaato cidda ku guuleysatay wareeggaas.
Maxay yihiin jaantusyada istiraatiijiyadda baccarat?
Dabcan, inbadan oo kamid ah dadka ku cusub Baccarat ma ahan kuwa aqoon u leh ciyaaraha nasiibka halkaasoo ay kula ciyaarayaan guriga. Xaqiiqdii, in badan oo ka mid ah khamaarayaasha adduunka ugu kartida badan ayaa gooyay ilkahooda iyagoo ciyaaraya ciyaaro sida Blackjack. Iyada oo ay iskaga mid yihiin waxyaabo badan, macno ayey u lahaan laheyd ciyaartoydan inay waqti fudud ku haystaan ​​miiska, sax?
Haddii kale, maxay taasi uga dhigan tahay dadka rumeysan in hibadu ay tahay shay ku dhex jira shakhsiga dhexdiisa? Nasiib wanaagse, fekerkeenna, waxaas oo dhan micnaheedu waa in Baccarat ay aad ugu sahlan tahay bilowga in badan oo ka mid ah cayaaraha kale ee casino.
Si ka duwan blackjack, sharciyada ayaa wax yar ka jilicsan baccarat loogu talagalay ciyaartoy cusub:
Markii aad ciyaareysay Blackjack ama aad aqrinaysay blackjack ugu fiican ee la hagayo iyo xeeladaha , sharciyada ayaa si gaar ah u adag. Sidaa darteed, way fududahay in la hindiso miis kuu sheegaya waxa saxda ah ee la samaynayo duruufo gaar ah. Iyada oo leh natiijooyin badan oo kala duwan, ma sahlana in la sameeyo wax la mid ah ciyaar sida Baccarat ah.
Xusuusnow, khamaarista guuleysta ee bangiga waxay leeyihiin guddi dhexdhexaad ah oo laga jaray guulaha:
In kasta oo ay adag tahay, haddana waxna kama celin dadka kale inay ka faa’iidaystaan ​​faa’iidooyinkooda. Mararka qaarkood, aragti cusub ayaa gilgili karta habka warshadaha oo dhami wax u eegaan. In kasta oo muddadaas ay jirtay, haddana cidina weligeed fursad ugama ay helin inay u aragto siday ahayd.
Marka lagu soo bandhigo xarig, istaraatiijiyado ayaa ku tarmi kara isdhaafkooda:
Ugu dambeyntiina, xaaladaha badankood, waxaad ka heli doontaa tallaabada saxda ah ee si fudud u fududayn kara. Dhinaca kale, arrimuhu way ka murug badan yihiin haddii aad ku soo gabagabeyso leexashada xarig. Haddii taasi dhacdo, markaa waxaad u baahan doontaa inaad si dhab ah u tixgeliso inta faa’iidada gurigu u qalanto munaasabaddaas. Mararka qaarkood, way fiicnaan laheyd inaad sii wadato illaa dhamaadka qadhaadhka. Hase yeeshe, duruufaha qaarkood, dib u gurashadu ma noqon doonto go’aan sharaf dhac ah. Sow ka roonnaan maysid in maalin kale la dagaallamo intaan dagaalka ka hor dhinto? Su’aalaha la midka ah ayaa aabbeheen ku dhacay kumanaan sano ka hor. Maanta, dagaallo noocan oo kale ah ayaa ka dhex dhaca maskaxdeenna maalin kasta.
Tilmaamaha Baccarat ee bilowga
Ka soo qaad inaad jeceshahay inaad bilowdo. Si kastaba ha noqotee, maaddaama aadan waligaa cagta dhex dhigin khamaar ama aadan ku ciyaarin casino online ah , in yar oo aad ka walwalsan tahay sida ay wax u socdaan markii aad degto. Dabcan, sheekooyin badan ayaa shukulaatada hareeraha xafiiska ku saabsan sida dadku ugu guuleysteen wax weyn usbuuc dhammaadkii.
Weli, waxaad aragtay wax ka badan qaybtaada caddaaladda ah ee sheekooyinka naxdinta leh ee ka yimid dadka u baahday inay iska diiwaangeliyaan qamaarayaasha iyagoo aan la aqoon ka dib dallad ballaadhan. Sida wax walba, dhexdhexaadintu waa furaha. Uguyaraan tan, istiraatiijiyaddaadu waxay saameyn ku yeelan doontaa sida natiijada ciyaarta u egtahay dhamaadka.
Wax ka barashada waxyaabaha laga faa’iideysto:
Marka ugu horeysa, had iyo jeer waxay noqoneysaa fikrad wanaagsan in la hubiyo sida ciyaartoyda adduunka ugu caansan ay u gaaraan hadafyadooda. Iyaga si ay u ahaadaan halka ay joogaan, waa inay soo saaraan farsamooyin ka fogaan lahaa xitaa sahamiyayaashu kuwa ugu cabsida badan. Adoo raacaya tusaalahooda, waxaad udhaqaajin doontaa toobiye meelo sare oo sharaf leh.
Maareynta halista ee loogu talagalay kuwa jecel xiisaha loo yaqaan ‘wagers guul’:
Ka dib markii la falanqeeyo sida xirfadlayaashu u ciyaaraan qilaafaadka, way fududahay in la arko inaysan u soo dhowaanin casino si la mid ah sida ugu badan. Halkii ay u eegi lahaayeen sidii ciyaar oo kale, waxay umuuqdaan inay uga fekerayaan inay tahay xirfad. Sidaa darteed, waxay u kala bixiyeen mid kasta oo ka mid ah faahfaahinteeda. Marka, munaasabadaha badankood, waxaad kaheli doontaa xigmad badan xilliyadaas dhiirrigelinta murugsan ee dabaysha dul sabeynaya.
Xeeladaha khamaarka Baccarat
Hagaag, waqtigan, waxaad haysaa faham wanaagsan oo ku saabsan sida qaabdhismeedka ciyaartu u ekaan doono mar haddii aad miiska fadhiisatay. Waxa kaliya ee kuu haray inaad barato ayaa ah sida aad u qorshayn lahayd sharadkaaga. Markaad kahesho suunkaaga hoostiisa, waxaad diyaar u noqon doontaa inaad la socoto qof kasta oo albaabbada ka galaya markaad guriga la wareegayso. Nasiib wanaag, maadaama ciyaartan ay ciyaartoydu ka horyimaadaan guriga, waxaa u muuqda inuu jiro dareen saaxiibtinnimo oo ka dhex jira ciyaartoy firfircoon.
Isku dheelitirka cidhifka guriga iyo qorshe istiraatiijiyadeed:
Maaddaama ay suurtagal tahay in la xisaabiyo inta caddood ee gurigu yeelan doono, waxaan u isticmaali karnaa qaybtan muhiimka ah ee macluumaadka si aan uga faa’iideysanno. Adiga oo kaliya geliya sharad badan marka ay faa iidadu tahay tan ugu yar, waxaad ku fiicnaan doontaa kala duwanaanshahaaga dhanka kale. Sidaa darteed, maahan oo keliya inaad ogaato goorta la dhigo sharadkaaga. Sidoo kale waa inaad tixgelisaa waxa cabirka ugu fiicani noqon doono markaad dhigto.
Habka gardarada ah waa la damaanad qaadaa mararka qaar:
Waxay kuxirantahay sida habeenku socdo, waxaad ubaahantahay inaad tixgaliso qaab dagaal. Ka soo qaad inaad ku dhibtooneysay inaad hesho gacan wanaagsan saacado kooban. Halkaa markay marayso, qayb idinka mid ahi waxay dareemaysaa inay fiicnaan lahayd in loo yeedho habeen. Weli, dhowrkii doolar ee ugu dambeeyay jeebkaaga, waxaad dib ugu qori kartaa sheekada oo dhan. Adoo ku dhejinaya barafka Mary bet, gacanta ugu dambeysa ee habeenku waxay noqon doontaa waxa go’aamiya xukunka ugu dambeeya. Mararka qaar, si farxad leh ayaad ula yaabi doontaa natiijada.
Barashada goorta la wacayo ayaa si isku mid ah muhiim u ah:
Inta badan, waa wax caqligal u ah ciyaartoydu inay bartaan goorta ay tahay in si muuqata loo dhigo. Waxa runti u muuqda inay jahwareeriyaan kuwa dhowaan soo galay intooda badan markay barteen xadhkaha ayaa ah waxa iska soo horjeedka dhabta ah. Mararka qaarkood, Waxaad dareemi doontaa inaad kujirto xarig kulul. Ka sokow, dhowrkii gacmood ee ugu dambeeyay, wicitaanadaadu waxay ku qummanaayeen lacagta. Weli, waa waqtigan inta badan hiwaayaduhu waxay bilaabaan inay lumiyaan xakameynta naftooda iyadoo ay ugu wacan tahay saameynta aan loo baahnayn ee shucuurta xun. Markaad jimicsi ku sameysid is-xakameyn, waxaad baran doontaa goorta aad ka guureyso miiska sidii guuleyste. Taa baddalkeeda, waxaad arki doontaa dad badan oo ka soo dhacaya meelaha sare ee nimcada maxaa yeelay waxay ku sii jiraan muddo dheer.
Talooyinka iyo tabaha baccarat ee ugu fiican ee kaa caawiya inaad guuleysato
Markaad raadineyso inaad garaacdo tartamayaasha, kala soocida talo adag ee macluumaadka marin habaabinta waa muhiim. Haddii aanad fahmin noocaas ah, waxaad ku bixin doontaa tan dadaal dadaal ah barashada.
Si kastaba ha noqotee, dhamaadka, waxaad kaliya ka dhigi doontaa ciyaarta xitaa naftaada mid aad u adag. Hoosta, waxaan ku qornay waxoogaa macluumaad ah labada farsamood ee ugu waxtarka badan ee dadku baran karaan.
In kasta oo ay jiraan xeelado badan oo dheeri ah, kuwaasna, waxaad si kalsooni leh ugu soo bandhigi kartaa khilaafaadka ka jira dhankaaga.
Ilaa iyo inta aad si habboon ugu dhaqan gelinaysid, waa inay kaa caawisaa inaad hagaajiso fursadahaaga inaad guriga ku socoto adigoo dhoola cadeynaya wejigaaga. Haddii ay ahayd inaad na weydiiso, waxaan dhihi lahayn taasi waa dadaal qiimo leh.
Kala soocida Edge:
Mararka qaar, dadka bilowga ah waxay u arkaan habkan mid ka sahlan marka loo eego qaar badan oo ka mid ah farsamooyinka kale ee caanka ku ah ficil ahaan. Maaddaama aan lagaa rabin inaad isticmaasho xisaab kasta, maahan mid ku dhow sida falanqaynta sida wax la mid ah tirinta kaarka. Si kastaba ha noqotee, waxay u baahan tahay xusuusta shaqada ee degdegga ah. Haddii kale, ma awoodi doontid inaad si sax ah ula socoto isbeddellada ka dhex jira kaararka.
Farsamadan, ogeysii geesooyinka qaloocsan: Caadi ahaan, waxaad ubaahantahay inaad miiska ag fadhiisato xoogaa kahor intaadan wax jajab ah ku dul tuurin. Intii aan daawaneynay, si dhow u baro darafka kaararka gaarka ah. Haddii aad fiiro gaar ah u yeelatid, waxaad ogaan doontaa in kaararka gaarka ah ay u laaban yihiin qaab la garan karo.
Xusuusnow inaadan leexin kaararka: Ka dib markii aad daraasad dheer qaadatay, waxaad sameyn doontaa wicitaano sax ah oo ku saleysan muuqaalkooda. Dabcan, waligaa ha noqon kaararkaaga, maxaa yeelay tani waxay ka soo horjeedaa sharciyada khamaarka. Haddii lagugu qabto adiga oo isticmaalaya kaararka, waxaa lagaa tuuri doonaa xarunta si ka badan sida ay u badan tahay. Hase yeeshe, ha u oggolaan maareeyaha dabaqa xanaaqsan inuu ku cabsi geliyo adiga oo aan wax qalad ah sameyn. Ku ekaashada kaararka ma aha dambi, xitaa haddii ay wanaajineyso fursadahaaga guuleysiga.
Dabcan, farsamada ugu caansan ee aad ku dalban karto ciyaaraha kaararka waxaa caan ku noqday filimaan fara badan iyo warbaahin kale oo caan ah. Natiijo ahaan, si aad u qurux badan qof kasta oo adduunka ku nool ayaa ka maqlay tirinta kaararka. Si kastaba ha noqotee, waxay sidoo kale noqon kartaa walxaha halyeeyada. Maaddaama ay u baahan tahay qaddar yar oo hibo leh xisaabta, qof kastaa uma arko inay u fududahay sida uu jeclaan lahaa bilowgii. Iyadoo aan loo eegin, illaa intaad ballanqaadi karto, inaad si fiican ugu barato inaad ku dalbato ma aha wax adag sida badankood aad u rumaysan lahayd. Sidaa darteed, waxaan ku soo koobnay mabaadi’da asaasiga ah hoosta.
mabaadi’da tirinta kaarka muhiimka ah
Dhowr habab oo kala duwan ayaa jira: Haddii aad ciyaarta ku jirtay waqti kugu filan, markaa waxaad ka heli lahayd dad adduunka ka socda oo kuu sheegaya sida loo tiriyo kaararka. Waxay umuuqataa inay jiraan wax kabadan dhowr farsamooyin si hufan wax looga qaban karo. Sidaas oo ay tahay, way fiicnaan lahayd haddii aad farsamo toosan oo toos ah u adeegsato dhawrka jeer ee ugu horreeya miiskaaga. Habkaas, aad ayey uga sii yaraan doontaa inaad sameyso qalad khalad ah oo kuu keenaya inaad lumiso guuleysigaada.
Kuwa ugu caansan waa habka “-1,0, + 1”: Tilmaamaha soo socda ee tallaabo-tallaabo ah, waxaan ku tusi doonaa sida loo isticmaalo habka ugu caansan. Waxaa markii ugu horeysay caan ka dhigay koox ka mid ah ardayda MIT oo ku guuleystay inay si weyn ugu guuleystaan ​​Las Vegas dhamaadka usbuuca intii ay ku jireen kulleejada. Laga yaabee, inaad filim ka aragtay kooxdan. Rumayso ama ha rumaysan, waxaas oo dhan waxay ku salaysnaayeen sheeko xalaal ah. Carruurtaasi runtii waxay ku guuleysteen inay garaacaan guriga fiidnimadii masiiriga ahaa. Adoo raacaya raadkooda, waxaad sidoo kale fursad u heli doontaa inaad sharafta ka qayb gasho. Ka sokow, maxaa kale oo aad waqtigaaga ku qaadan doontaa inaad qabato? Tan, waxaad ugu yaraan ku baran doontaa xirfad dakhli soo saar.
Kaararka leh qiyamka wajiga ee kayar 9: Dhammaan kaararkaani waxay heli doonaan qiime -1. Sidaa darteed, markaad aragto iyaga oo la macaamilay, waxaad mid ka jareysaa wadarta guud ee madaxaaga. Markasta oo ay gacan kastaa sii socoto, waad sii wadi doontaa inaad isla habeenkii oo dhan sidaas sameyso.
Kaadhadhka leh qiimayaasha u dhexeeya 9 iyo 10: Markaad aragto mid ka mid ah kuwan oo ciyaaraya, waxaad ku neefsan doontaa neef qoto dheer oo nasasho ah. Maaddaama loo qoondeeyey qiimaha eber, uma baahnid inaad wax maskaxeed ah ku darto si aad u haysato wadarta saxda ah.
Wixii kaararka boqortooyada iyo aces: Wax kasta oo qiimihiisu ka badan yahay 10 marka loo eego qiimihiisa wajiga waa inuu helaa qiimaha +1. Sida oo kale, markaad aragto ganacsadaha mid jiifsada, ku dar 1 wadarta wadarta maskaxdaada. Waxaa muhiim kuu ah inaad markasta ilaaliso tirada maskaxda ee saxda ah. Haddii kale, waxaad waayi doontaa faa iidada aad kuheli laheyd duruufaha kale.
fiiro gaar ah u yeelo kaar kasta sida loola macaamilayo: Waxay kuxirantahay meesha aad ku ciyaareyso, xawaaraha ganacsadaha inta ay dhigayaan kaararka wey kala duwanaan karaan si aad ah. Haddii aad ku fiicantahay xisaabta maskaxda, waxaad awood u yeelan doontaa inaad ilaaliso tirinta saxda ah oo aad uga fudud marka loo eego qof qaba hawlo maskaxeed oo gaabis ah. Dabcan, ilaa iyo inta aad ka heli karto meel kaararka si tartiib tartiib ah u ciyaareysa, waa inaadan dhibaato ku yeelan midkoodna.
Inta ciyaartu socoto, madaxa ku hay dhibco orod ah: Sii wad inaad ku darto lambarrada si wada jir ah madaxaaga. Waqtigaan la joogo, waa uun ciyaar sugitaan oo kuu baahan inaad maskax ahaan firfircoonaato. Ilaa waqtiga saxda ahi yimaado, sii wad xadaynta halista aad ku qaadan karto gacan kasta. Haddii kale, ma heli doontid jajab ku filan miiskaaga si aad uga faa’iideysato fursadda ugu fiican ee ay ku sii marayso.
Marka la isku daro wadarta guud waxay noqoneysaa mid si aad ah u jahawareersan, waxaa la joogaa waqtigii la sii kicin lahaa: Inta ciyaarta socoto, waxaad raadineysaa tirooyin aad u kala qeybsanaan badan. Si kale haddii loo dhigo, marka wadarta guud ay gaarto qiime sare, waxaad u baahan doontaa inaad bilowdo inaad dhigto sharad culus. Haddii ay tahay mid togan ama mid taban waxba kuma jabna. Waa qiimaha saxda ah ee tirada ay tahay inay hagto go’aamadaada. Tusaale ahaan, ka soo qaad wadarta wadadu inay gaadhay -12. Hadday taasi dhacday sidaas, markaa waxaad dooneysaa inaad dhigto tan lacag ah. Sababta oo ah, ka hor inta aan dheerayn, wadartaas waa in loo sinnaadaa. Sidaa darteed, waxaad haysataa dammaanad tirakoob ah riwaayadaha soo socdaa inay noqdaan kuwo wanaagsan.